Sawirro: Boqolaal Qof Oo Ku Dhintay Wadanka Sierra Leone Kadib Roobab Daadad Wata Oo Ku Dhuftay Magaalada Freetown.
Tuesday August 15, 2017 - 22:08:16 in Wararka by Super Admin
Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa usoo gashay malaayiin qof oo kunool wadanka Sierra Leone ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika kadib markii ay ku dhufteen roobab daad wata kuwaasi oo gallaaftay nolosha boqolala qof.
Hay’adda Bisha Cas ee wadanka Sierra Leone ayaa xaqiijisay in 300 oo qof ay dhinteen kadib Roobab mahiigaan ah oo ku dhuftay magaalada caasimadda ah ee Freetown, Abuubakar Taraawali oo ah mas’uulka ugu sarreeya Ururka Bisha Cas ayaa sheegay in Daadad dhoobo wata ay ku habsadeen boqolaal guri iyo gooba ganacsi.
Meydadka 300 oo qof ayaa lagasoo aruuriyay xaafadaha magaalada Freetown waxaana laga digayaa in musiibo hor leh ku dhufatay wadankaasi, sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya in biyaha xareedda oo latagay gaadiid iyo gooba ganacsiga.
Meelaha ugu daran ee biyaha dhoobada wata ku fataheen waxaa kamid ah xaafadaha ku teedsan buuraha caanka ah ee magaalada Freetown ku teedsan, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in boqolaal kamid ah ciidamada gurmadka deg degga ah lagu faafiyay xaafaha dhibaatadu ka jirto.
Roobab Mahiigaan ah oo saacado xiriir ah da’ayay ayaa xaaladdiisa sii xumeeyay, ugu yaraan 100 dukaan oo kuyaal bartamaha magaala Freetown ayaa dhulka ka hoos maray waxaana laga cabsi qabaa in dhimashada ka dhalatay daadadkan ay gaarto 500 oo qof.